okpokoro okpukpu osisi na UL China Manufacturer
Nkọwa:Okpokoro Okpokoro Osisi Osisi na UL,Kedo na chara osisi na UL,Okpokoro Igwe Ọkụ na UL
Home > Ngwaahịa > Ulo Okpokoro Ugbo > Mkpụrụ Okpomọkụ Ọkụ > okpokoro okpukpu osisi na UL
okpokoro okpukpu osisi na UL
Ugbo ahihia anyi na akpu na UL akwukwo, i nwere ike na-ekpo ọkụ maka ite osisi gi, mgbe ahu osisi gi ga eto nke oma n'oge oyi ma obu oyi.
Lee na-eso anyị osisi ite okpomọkụ mpempe akwụkwọ na oyi nkọwa:
Ihe mgbochi anyị na - ekpo ọkụ na - enye mkpụrụ osisi ahụ maka ịmị mkpụrụ na ngwa ngwa .N'ihi na nke kacha mma, anyị na - atụ aro ka mkpụrụ ịmalite tray na bọtịnụ kpakpando na dome humidity .A pụrụ ịkụnye ngwongwo ndị a gbanyere mkpọrọgwụ ozugbo na mkpụrụ ọ bụla na - eto eto. ịzụlite ihe ọkụkụ .Ndị ọhụrụ ozuzu a nwere ike ịmalite oge germination na ọ bụ ụzọ dị mma isi mee ka osisi gị bụrụ mmalite.
Ejikwala ngwaahịa anyị iji kwadoro ụkpụrụ CE, RoHS, Ul, ETL. Ogo na-edozi n'ezie.
OEM oru amara
Isi ihe : PVC
size: 200 * 450mm, ahaziri dị
elekere : 24w, ahaziri aha
voltage : 120v, ahaziri dị
Max okpomọkụ : 42 ℃
agba : nwa, ahaziri
oge ndu : ụbọchị 30
Snake na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Na UL Kpọtụrụ ugbu a
Ihe ndi na-ekpo ekpo ekpochapu ihe ndi ozo maka ebe a na-akpo oku ulo Kpọtụrụ ugbu a
Ihe nkiri na-ekpo ọkụ maka ịhịa aka n'ahụ oche oche Kpọtụrụ ugbu a
Okpokoro Okpokoro Osisi Osisi na UL Kedo na chara osisi na UL Okpokoro Igwe Ọkụ na UL Okpokoro Okpokoro Osisi Osisi Kpoo Okpokoro Osisi Osisi na Winter Okpokoro Okpokoro Osisi Osisi Okpokoro Osisi Osisi Okpokoro Okpokoro Mkpụrụ Obi